ZESA Yogadzirisa Gwenya ReHwange Kuti Magesti Awanikwe Munyika
Kambani yeZESA inoti iri kutarisira kuti gwenya rayo remoto riri kuhwange richange rapera kugadzirwa nesvondo kunyange hazvo vana mazvikokota vekambani iyi vakatanga kugadzira gwenya iri nechitatu parakafa.
Kufa kwegwenya iri ndiko kunonzi kuri kukonzera kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwakatanga nechitatu munyika yose. Vanowona nezvekufambiswa kwemashoko mukambani yeZESA, va Fullard Gwasira, vanoti vari kukumbira veruzhinji kuti rwuvanzwisise panguva ino sezvo kambani yavo iri kushanda zvakasimbarara kuitira kuti magetsi awanikwe nyore munzvimbo dzese.
Pari zvino Zimbabwe ine chikwereti ku kambani ye Hydro electrica De Cahora Bassa chemari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora. Veruzhinji vanoshandisa magetsi vane chikwereti chinosvika zana nemakumi mana emamiriyoni emadhora. Mutungamiri wenyika, vaRobert Mugabe, vanonzi vane chikwereti chinodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora. Vanhu vakaita savaMugabe nevamwe vavo, ndivo vari kupa kuti ZESA itadze kutenga magetsi akawanda kunze kwenyika.
Vezvemabhisimisi madiki vanotiwo dai ZESA yagadzisira nyaya yemagetsi nechimbichimbi sezvo vari kurasikirwa nemari dzakawanda panguva iyo magetsi anenge asipo. Muzvare Samatha Shava vanoita basa rekubika sadza vachiritengesera veruzhinji muharare. Vanoti pari zvino vave kufunga kumbomisa basa ravo sezvo michina yavo yese isiri kushanda nekukushaikwa kwemagetsi.
Hurukuro naVa Fullard Gwasira
Hurukuro NaMuzvare Samatha Shava